Hotel Projects International - Armati Fundisa kuwe Anatomy of a ebhafini kunye Indlela Faka Replacement
NgoLwesihlanu, Meyi 5, 2017 3: 17: 19 AM America / Los_Angeles
zobukhulu yokuvasa ingahluka. Phambi kokuba uthenge, khangela imilinganiselo kwisitya omtsha ukuze kuya ilingane kwi ndawo enye endala. Enye ingqalelo kunye izitya ezinkulu kakhulu kukuba ingaba uza kuba uyakwazi ukwenza yona indlu yakho yangasese. Igumbi emsebenzini nayo ibalulekile - ingakumbi kwigumbi lokuhlamba ezincinane. maxa wambi kuya kuba yimfuneko ukuba kususwe ezinye zalapho lokuhlambela ukuze ususe i ebhafini endala ufake entsha.
Anatomy of a ebhafini
Ukuqhagamshela unikezelo lwamanzi ibhafu iyafana nje isitya. Umahluko omkhulu xa kufakwa ibhafu kukuba lingaba likhulu inzima, yaye ukufikelela imibhobho kunokuba nzima.
Yokuvasa Plumbing Overview 01: 44
Amy kubonisa inkqubo ngemibhobho umsele yokuvasa kunye ukuphuphuma.
nezindlu uphose-yentsimbi zokuhombisa inokuba abaviwa sokulungiswa. Ukuba akunjalo, ezi zinto enzima enokwaphulwa up usebenzisa i sledgehammer kwaye zonke izinto irisayikilishwe. Wakugqiba ukwenza oku, zingabonisi nethontsi ngeqhiya phezu yokuhalamaba endala ukuba ayeke kobutyobo ezibhabhayo qiniseka ukuba banxibe izibuko zokuzikhusela, indlebe ngabakhuseli kwaye iiglavu.
Xa ufaka umgqomo ongangokugibisela-yentsimbi, ukuqinisekisa ukuba ubunzima bayo isasazwa ukuthwalisana yemiqadi yokuhlanganisa floor eziliqela. Ngeeplanga iinkuni ngaphantsi iinyawo umgqomo nga ukunceda ukwandisa ubunzima. Kwezinye iimeko, kusenokufuneka ukubethelela yemiqadi yokuhlanganisa ngezantsi.
Ukususa i ebhafini
Phambi kokuba uqale, qinisekisa ukuba igumbi ngokwaneleyo ukuba ilingane ebhafini emnyango. Cima namanzi. Emva kokuba amanzi sele icimile, vula i faucet ngaphantsi kwenqanaba umgqomo asophise imigca kwamanzi. Susa faucet, idreyini, ize Senga. Ukuba yokuvasa yakho engena phakathi kweendonga zombini, kunye nentloko faucet yaye uhlamba ibekwe phezu kodonga nye, nibe nako uyeke igiza uze kume ebhafini ngaphandle. Ukuba oku akusebenzi, kusenokufuneka ukususa icandelo eludongeni ngeenxa ebhafini, wayityatya imibhobho, uze ususe ebhafini khawugqobhoze eludongeni. Ukuba yokuvasa yakho ozimeleyo, ukususwa kuba lula. Emva zokuqhawula igiza, kufuneka ukwazi ukuba uphakamise ebhafini ngaphandle nje.
Ukufaka i ebhafini
Phambi kokufaka yokuvasa entsha, qiniseka ukuba ukukhethwa yakho kufanelekile ngqo kwi isithuba endala yokuvasa. Qinisekisa ukuba ifaskoti-kusithiwa okanye drop-in, nokuba le mali kwicala enye, kuba kwiibhafu bangaba ekunene-ngesandla okanye ekhohlo-ngesandla yamanzi amdaka. Ukuba ebhafini ayikho ndandivutha ngqo, i imibhobho kuza kufuneka ilungiswe ukuze ebhafini elitsha. Ukuba yinto kufanelekile ngqo, uya ulandele amanyathelo afanayo kuzo kokususa ebhafini endala, nje umva. Kusenokufuneka ukuba bayihlaziye umphezulu eludongeni ukuze lihlale phezu esisangqa le ebhafini entsha. Soloko usebenzisa backerboard isamente phantsi iithayile kwimimandla ebhafini okanye ishawari sokukhuselwa ukufuma ukuthintela ingxaki ngumngundo kunokwenzeka. drywall rhoqo ezingarhafelwayo ukusingatha ukufuma ngokugqithiseleyo.
Ukulinganisa le Indawo
Linganisa uze uphawule indawo ebhafini kaThixo ileja (Image 1).
Qhoboshela ibhodi ileja, nto leyo eza kuxhasa ebhafini kaThixo ileja (Image 2).
Ukuhlobanisa kwe mijelo
DK - Do It Yourself Ekhaya Improvement, 2009 Dorling Kindersley Limited
Ngoxa umgqomo ngeenxa wayo, eyomileyo ukulingana imibhobho idreyini kunye namanzi (Image 1).
Faka i gasket rubber kwi ityhubhu yokuvasa ukuphuphuma, waza kuyo waqhoboshela kwi iemele (Image 2).
Sebenzisa izixhobo ezinikwa mabaqhoboshele isibiyeli lokumisa lokugcina (Image 3).
Faka isangqa putty ngumtywini ehlabathini esisangqa idreyini (Image 4).
Qhoboshela idreyini ukuya ebhafini, esebenzisa izikrufu ukubamba endaweni (Image 5).
Dibanisa i lokumisa
Sebenzisa ga inaliti ukudibanisa indlela lokumisa chain ukuba kufanelekile lokumisa (Image 1).
Route chain ukusuka kufanelekile lokumisa ngokusebenzisa ebhafini, nawayenxuse isibiyeli yokugcina (Image 2).
Ukunqabiseka fit lokumisa endaweni usebenzisa izifakelelo enikiweyo (Image 3).
Phakamisa ebhafini endaweni ufake nakumsele wamanzi umbhobho indibano ibe idreyini (Image 4).
Ekugadeni umgqomo Kwindawo
Bambethelela ngokutsha esisangqa ukuya amaqhosha ebhutsi eludongeni (Image 1).
Qinisekisa ebhafini umgangatho, ngoko kugqibezela iindonga ezazijikeleze (Image 2).
Ukulungisa i lokumisa
Njengoko ixesha kunye nokusetyenziswa, ngesiciko yokuvasa kupheliswe ukuvala ukuhamba kwamanzi ngendlela eyiyo. Susa kwipleyiti lokumisa ubuso ukusuka eludongeni.
Libeke indlela uze ulungise kwikhonkco ukulingana.